AMISOM oo kawar bixisay khasaarihii ka soo gaaray dagaalkii shalay
Mogadishu Sabti 31 March 2012 SMC
AMISOM oo kawar bixisay khasaarihii ka soo gaaray dagaalkii shalay.
War saxaafadeed ka soo baxay taliska ciidamada midawga Africa ka jooga Soomaaliya ee AMISOM oo looga hadlayay dagaaladii shalay ka dhacay Muqdisho ayaa waxaa lagu sheegay inuu jiro khasaaro ciidamada AMISOM ka soo gaaray dagaalkaasi.
War saxaafadeedka ayaa waxaa lagu sheegay in hawlgalo ay fuliyeen ciidamada dawlada Burundi ee qeybta kaah ciidamada AMISOM ay isku fidiyeen dhul hor leh oo ku yaala degmada Dayniile ee gobolka Banaadir halkaasoo ay horeyugu sugnaayeen dagaalyahanada Xarakadda Al-Shabab.
Afhayeenka ciidamada AMISOM Paddy Ankunda ayaa sheegay dagaalkii shalay dhacay ay uga dhaawacmeen illaa iyo 4 askari oo u dhashay wadankas Burundi waxaase uuxusay inuu jiro khasaaro ay gaarsiiyeen dhabnka Al-Shabab sida uu sheegtay.
“Dhinaceena 4 askari ayaa nooga dhaawacantay laakiin waxaan idiin xaqiijinayaa inaan khasaaro aan yareyn aanu u gaysanay Al-Shabab oo aanu jabinay” ayuu yiri Paddy Ankunda afhayeenka AMISOM.
Afhayeenku waxaa uu sidoo kale sheegay inay hadda gacanta ku hayaan deegaanadii layhu dagaalamay ciidamaduna ay isku fidiyeen goobo degmada Dayniile oo ay ka mid yihiin Isbitaalka, iyo garoonkad diyaaradaha macmalka ee degmada ku yaala.
Sidoo kale waxaa uu tilmaamay afhayeenka AMISOM inay ku weajahan yihiin goobo kale oo ay hadda ka taliyaan ama ay ka jiraan maamulada Al-Shabab.
Ciidamada dawlada iyo kuwa AMISOM ayaa shalay weerar ku qaaday fariisimo ay Al-Shabab ku lahaayeen qeybo ka mid ah degmada Dayniile.